3 sababood oo loogu isticmaalo xakameynta waalidka mobilada carruurtaada | Androidsis
Eder Ferreno | | Amniga, Tababarada
Markasta oo aan kulanno oo leh carruur badan oo haysta taleefanka gacanta. Waalidiintu waxay rabaan in caruurtoodu isku xirnaadaan wakhti kasta oo ay awood u yeeshaan inay si toos ah ula xiriiraan iyaga haddii loo baahdo. Xoogaa la fahmi karo, inkasta oo waliba dhibaatooyin keeni kara. Tan iyo markii la arkay adeegsi aan habooneyn ee mobilada xaalado badan.
Waayo, waxaa jira xakameynta waalidka. Tikniyoolajiyad mahadsanid waalidiintu way xakamayn karaan waxa carruurtoodu ku sameeyaan taleefannadooda casriga ah. Marka lagu daro awood u lahaanshaha xannibaadda marin u helka codsiyada qaarkood ama bogagga shabakadda.
Waa aalad xoogaa muran ka taagan yahay. Laakiin waalidiin badan, xakamaynta waalidku aad ayey waxtar ugu leedahay. Sidaa darteed, hoosta waxaan kaaga tageynaa qaar ka mid ah sababaha loo isticmaalo xakameynta waalidka ee qalabka Android ee carruurtaada.
1 Xakamee waxaad samaynayso
2 Iska ilaali khayaanada
3 Ka fogow balwadda moobiilka
Xakamee waxaad samaynayso
Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee waalidiin badani u rakibaan kontaroolada waalidka. Thanks to aaladdan waan awoodnaa kontorool waqti kasta waxa uu ilmaheennu sameeyo. Maaha inaad ku xad gudubto arimahaaga gaarka ah, laakiin waa inaad ka fogaato wax dhibaato ah oo ku saabsan amnigaaga. Tan iyo markii sidan oo kale ah, waan awoodnaa ka ilaali inay galaan bogagga waxyaabaha aan habboonayn da'diisa.
Sidoo kale, barnaamijyo xakameyn waalidnimo badan waxay ku siinayaan ikhtiyaar aad ku joojiso waxyaabaha ku jira. Waan xannibi karnaa boggaga ama barnaamijyada mahadnaqa qalabkan. Marka waa hab looga hortago inay adeegsadaan waxyaabo ka mid ah waxyaabaha aan ku habboonayn da'dooda.
Iska ilaali khayaanada
Hadda khiyaanooyin badan ayaa ku wareega shabakada. Labadaba bogagga shabakadaha iyo barnaamijyada Android. Anaga qaangaarka ah badiyaa waan ognahay sida loo kala saaro khayaanada si fudud. Uguyaraan, waan ognahay sida loo aqoonsado calaamadaha qaarkood ee naga dhigaya inaan u maleyno inay wax yihiin khiyaano. Laakiin, carruurta, arintu sidaas maahan. Ma yaqaaniin inay khiyaamo tahay iyo in kale.
Marka taas maqnaanshaha xakamaynta waalidka si looga caawiyo la socodka dhaqdhaqaaqa carruurta, waxay ku dambayn karaan inay noqdaan dhibanayaal khiyaano. Tani waxay yeelan kartaa cawaaqibyo badan. Mid iyaga ka mid ah oo lacag badani ku baxdo.
Sidoo kale, ciyaaro badan iyo codsiyo ayaan wax ku iibsaneynaa gudaha. Ilmuhu waxaa laga yaabaa inuusan ka warqabin in iibsashada noocan oo kale ah inta badan lagu bixiyo lacag dhab ah. Marka waalidku way dhamaan karaan lacag bixinta iibsiga gudaha-abka.
Ka fogow balwadda moobiilka
Wax ku soo noqnoqda marar badan dhalinyarada dhexdeeda waa taas qabatimo mobilada. Heerarka ugu sarreeya ee balwadda ayaa ka mid ah kuwa ugu da'da yar. Marka tani waa wax ay tahay in waalidku iska ilaaliyo markasta. Sidaas, xakamaynta waalidku mar kale waa qalab kaa caawin kara inaad iska ilaaliso xaalad sidan oo kale ah.
Mid ka mid ah shaqooyinka ay gacanta waalidku na siiso ayaa ah dejiso wakhti uu ilmaheennu ku isticmaali karo mobilada ama kaniiniga. Sidan oo kale, haddii aan dejino jadwallo, qalabku wuu damiyaa marka wakhtigu yimaado. Marka, waxaan xakameynaa isticmaalka ay ka sameyaan aaladahaan. Markaa la xaddidayo waqtiga ay soo bandhigayaan iyaga.
Waa a shaqo aad u faa'iido badan, Tan iyo markii aan sidan ka hortageyno inay la qabsadaan isticmaalka kiniinka ama taleefanka gacanta saacadaha oo dhan. Marka waxay sameyn karaan howlo kale oo la hubo inay wax badan ka faa'iidi doonaan.
Sida aad u jeeddo, xakamaynta waalidku aad ayey faa'iido ugu leedahay waalidiinta. Waa wax ka caawiya in la xakameeyo isticmaalka ay carruurtu ka samaystaan ​​taleefannada gacanta. Sidaa darteed, waa laga fogaadaa taas adeegsiga khaldan ee internetka ayaa la sameeyaa. Marka laga fogaado dhibaatooyin badan.
In kastoo waxaa fiican inaad xiriir wanaagsan la yeelato carruurtaada. Horey u sii ogeysii waxa laga qaban karo iyo waxa aan laga qaban karin internetka. Soo xaadir haddii ay isticmaalayaan mobilada oo kala hadal isticmaalka ay sameeyaan ama shakiga ay qabaan. Sidan, haddii kalsooni wanaagsan ka dhexeyso labada dhinac, waxay si wanaagsan uga faa’iideysan doonaan mobilka. Kaa horjoogsanaya inaad isticmaasho xakameynta waalidka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Sababaha loo rakibo xakamaynta waalidnimo mobilada carruurtaada